Dalxiiska Jamaica wuxuu ku abaalmariyaa mutadawiciin Olombikada Japan fasax raaxo leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska Jamaica wuxuu ku abaalmariyaa mutadawiciin Olombikada Japan fasax raaxo leh
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Jaban ee Japan • News • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Jamaica wuxuu abaalmariyaa mutadawiciinta Olombikada Japan.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Mudane. Edmund Bartlett ayaa ku dhawaaqay in Guddiga Dalxiiska Jamaica oo kaashanaya daneeyayaasha maxalliga ah ay u fidin doonaan mutadawacnimada Olimbikada Japan, Tijana Kawashima Stojkovic, iyo marti ay dooratay, oo ah safar qaali ah oo kharashkiisu dhan yahay. Safarkan oo ka kooban afar kaniisadood, ayaa waxaa ka mid noqon doona booqashooyinka meelaha soo jiidashada leh iyo sidoo kale joogitaanka shan hoteel oo raaxo leh.
Tijana waxay caawisay Jamaican Hurdler Hansle Parchment Ciyaaraha Olombikada ee Tokyo, Japan.
Intii uu ku sii jeeday tartankiisii ​​semi-finalka, Parchmnet ayaa si qalad ah u qaatay Baska Shuttle-ka khaldan ee ay bixiyeen qabanqaabiyeyaasha dhacdada.
Stojkovic wuxuu siiyay Parchment 10,000 yen (wax ka badan US $ 90) si uu u bixiyo gaadiidka lagu aado Garoonka Olombikada ee Tokyo Talaadadii, 3 -da Luuliyo.
Casuumadda ayaa loo fidiyay Stojkovic si ay u noqoto mahadcelin lagu caawinayo Jamaican Hurdler iyo billad dahab ah oo dahab ah, Hansle Parchment, si ay u timaaddo Stadium Olombikada tartankiisa semi-finalka, ka dib markii uu bas khaldan ku sii jeeday goobta.
Ogeysiiska waxaa la sameeyay fiidnimadii la soo dhaafay (18 -kii Ogosto) intii lagu guda jiray xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Guddiga Dalxiiska Jamaica iyo Safaaradda Jamaica ee Japan.
“Farxad weyn ayay ii tahay inaan kugu martiqaado adiga iyo qof marti ah kharash dhan safarka Jamaica si aan u aragno sababta aan u nahay 'Garaaca Wadnaha ee Adduunka.' Waxaa lagugu daaweyn doonaa qolka madax -weyne ee adeegga naadiyaha Diamond ee Royalton ee Negril, iyo muuqaalka muuqaalka iyo adeegga aadka u wanaagsan ee Half Moon iyo Iberostar hoteellada Montego Bay, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
“Fasaxaagu wuxuu adiga iyo martidaada ku geyn doonaa Moon Palace ee Ocho Rios, waxaadna ka dareemi doontaa garaaca Kingston huteelka AC Marriott. Halkaas kuma eka, maxaa yeelay waxaad sidoo kale ku raaxaysan doontaa waayo -aragnimo dhammaystiran oo aad ku tagi doonto, taas oo kugu qaadan doonta safar muujinaya xiisaha gastronomical -ka iyo dhaqanka cajiibka ah ee waxyaabo badan oo kale, ”ayuu raaciyay.
Stojkovic wuxuu siiyay Parchment 10,000 yen (wax ka yar US $ 90) oo keliya si uu u bixiyo gaadiidkii uu ku aadi lahaa Garoonka Ciyaaraha Olombikada ee Tokyo Talaadadii, 3-da Luulyo, tartankiisii ​​semi-finalka, ka dib markii uu si qalad ah u qaatay Baska Shuttle ee khaldan ee ay bixiyeen qaban-qaabiyayaasha dhacdada. Kaalmadii naf-hurnimada lahayd awgeed, Parchment wuxuu awooday inuu garoonka gaaro waqtigii loogu talagalay wuxuuna galay kaalinta labaad ee semi-finalka wuxuuna markii dambe ku guuleystay bilada dahabka ah ee finalka.
“Waxaan rabaa inaan mar kale ku mahadceliyo oo aan idhaahdo sida aan ugu faraxsanahay kaalmada aad iga siisay Olombikada iyo sida ay iigu oggolaatay inaan ku guuleysto billadda dahabka ah. Waxaan sameeyay sheeko [baraha bulshada] oo waxaan la wadaagay qoyskayga, saaxiibbaday, iyo taageerayaashayda. Dhammaantood waa inay arkaan qalbiga cajiibka iyo naxariista leh ee aad haysato… jasiiradda quruxda badan ee Jamaica, si aad u timaadid oo aad waqti fiican ula qaadatid qoyskaaga, ”ayuu yiri Parchment.
Stojkovic wuxuu ka mahadceliyay casuumadda wuxuuna yiri, “Aad baan ugu faraxsanahay arrintan…
“Go’aanka Tijana ee ah inuu noqdo qof naftiisa u hura oo caawiya qof aan la garanayn ayaa ah astaanta waxa ugu wanaagsan aadanaha. Ficilkeedii naxariista lahaa wuxuu ku soo noqnoqday adduunka oo dhan wuxuuna na xusuusiyey inay jiraan waxyaabo badan oo maanta dunida ku habboon… falkan naxariista leh wuxuu u taagan yahay soo dhaweynta ugu wanaagsan ee dadka reer Japan dhammaan Jamaica -na way ku mahadsan yihiin, ”ayuu yiri Bartlett .